ဒီလိုလေးလဲဖြစ်တတ်ပါတယ်။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဒီလိုလေးလဲဖြစ်တတ်ပါတယ်။
Posted by မွသဲ ( 17082011 ) on May 26, 2013 in Creative Writing | 33 comments
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကပေါ့။ ကျွန်မမိတ်ဆွေတွေ ဖြစ်ခဲ့တာလေးပြောပြချင်တာပါ။ အကြာင်းအရာကြီးကြီးမားမားတော့ မဟုတ်ပေမဲ့ ဖြစ်တတ်တယ်။ ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆို တာလေး ပြောပြချင်တာပါ။ ကျွန်မမိတ်ဆွေရုံးကပေါ့။ သူကနိုင်ငံတကာရုံးကြီးပေါ့။ သူတို့ရုံးက တနှစ်တော့ ပြက္ခဒိန်ထုပ်မယ်။ ရုံးက၀န်ထမ်းတွေပုံနဲ့ပေါ့။ အဲဒါနဲ့ နေရာရွေး ကြတော့ ကန်တော်ကြီးကရှု့ခင်းလှတယ်ပေါ့။ အဲလိုနဲ့ တူညီဝတ်စုံတွေဝတ်ပြီး တရုံးလုံးပျော်ပျော်ပါးပါးချီတက်ကြတာပေါ့။ ရိုက်မဲ့ ဓါတ်ပုံဆရာကလဲ နာမည်ကြီး ( သက်ကြီး တန်းပေါ့ )။ ဆားဗစ်ကမနဲဘူး။ ဒီပုံကို သူကိုယ်တိုင်ရိုက်မယ်ဆိုပြီး သူကိုယ်တိုင် တပည့်တပန်းတွေနဲ့လာပါတယ်။ နေ့ဝက်လောက် ပိုစ့်အမျိုးမျိုးနဲ့ရိုက်ကြတယ်ပေါ့။ ရုံးက နိုင်ငံခြားသားတွေလဲပါတယ်။ နေပူထဲမှာ တ၀ုန်းဝုန်းနဲ့ပေါ့။ အဲချိန်မှာပဲ သူတို့ရုံးက ၀န်ထမ်းလေးတစ်ယောက်က သူ့မှာပါလာတဲ့ ဒစ်ဂျစ်တယ် ကင်မရာလေးနဲ့ သူကလဲ အားကျမခံ ဓါတ်ပုံဆရာကြီးရိုက်တဲ့ပိုစ့်တွေလိုက်ရိုက်တာပေါ့။ အပျော်တမ်းပေါ့။ ရုံးကလူတွေကလဲ သူ့ကိုစနောက်ပေါ့။ အဲလိုနဲ့ စိတ်တိုင်းကျဓါတ်ပုံရိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ လူစုခွဲလို့အိမ်ပြန်ကြပါတယ်။ နောက်နေ့တွေမှာ အဲဒီဓါတ်ပုံဆရာကြီးဆီမှာ ပြက္ခဒိန်ထုပ်ဖို့ ပုံတွေသွားယူကြတာပေါ့။ ဘယ်လိုကနေဘယ်လိုဖြစ်တယ်မသိဘူး။ ပုံတွေက တပုံမှမကောင်းဘူး။ တပုံမှသုံးမရဘူး။ အဲဒီမှာပြသနာတက်တာပဲ။ အဲဒါနဲ့ အဲဒီနေ့က အပျော်တမ်းဓါတ်ပုံ ရိုက်နေတဲ့ဝန်ထမ်းလေးကင်မရာပြေးဆွဲရတာပေါ့။ သူ့ပုံတွေ က ကောင်းရှာပါတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ သူ့ပုံနဲ့ပဲ ပြက္ခဒိန်ထုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက် ရပါတယ်။ ပြက္ခဒိန်ထွက်လာတော့ ကျွန်မလဲလက်ဆောင်ရပါတယ်။ အောက်မှာတော့ အဲဒီနာမည်ကြီး ဓါတ်ပုံဆရာနာမည်ခန့်ခန့်ကြီးပါလာပါတယ်။ ဒါလဲဖြစ်တတ်ပါတယ်။
နောက်ဖြစ်ရပ်တခုကတော့ TV ကြော်ငြာရိုက်တာပါပဲ။ မင်းသားက ပျိုတိုင်းကြိုက်တဲ့နှင်းဆီခိုင် အဆိုတော်သရုပ်ဆောင်၊ ဒါရိုက်တာကလဲ နာမည်အသင့်အတင့်ရှိ တဲ့ဒါရိုက်တာ။ ရိုက်ကွင်းကတော့ နာမည်ကြီးစတူဒီယိုတခုမှာ။ မင်းသားခ စတူဒီယိုငှားခ ဒါရိုက်တာခ ထမင်းကျွေးခ ဘာခ ညာခတွေပေါင်းလိုက်ရင် ပိုင်ရှင်ကုန်ကျစရိတ် မနည်းဘူး။ တနေကုန်ရိုက်ကြ၊ မကြိုက်ကြ၊ ပြန်ရိုက်ကြ၊ ရီဟာဇယ်လုပ်ကြ၊ ဒါရိုက်တာကလဲမော်နီတာမှာ ကြည့်ပြီး ဟိုနားမီးမှိန် ဒီနားမီးထွန်း ကင်မရာဘယ်လို ထားပေါ့ လေတနေကုန်မအားရဘူး။ ဘေးကလူတွေလဲမောပေါ့။ အဲလိုနဲ့ပြီးလို့အိမ်ပြန်ကြ၊ ကြော်ငြာလာမယ့်နေ့ကိုစောင့်ကြပေါ့။ ဘယ်နေ့ဘယ်ရက်မှာကြော်ငြာ စပါပါမယ်ပေါ့။ TV ရှေ့မှာထိုင်စောင့်။ လာပါပြီကြော်ငြာ၊ အဲဒီနေ့မှာတနေကုန်ရိုက်ထားတာ အခန်းမှမပါဘူး။ အဲဒါနဲ့ သက်ဆိုင်သူတွေကိုဖုန်းဆက်မေးတော့ အဲဒီဒါရိုက်တာ ရိုက်ထားတာတကွက်မှသုံးမရပါဘူးတဲ့။ အသံကြည်တော့အရုပ်မှုန်၊ အရုပ်ကြည်တော့အသံတုန်နဲ့ လွှင့်လို့ကိုမရလို့ တခြားဟာတွေ အစားထိုးထည့်လိုက်ရပါတယ်တဲ့။ အင်းနာမည်ကြီးပေမဲ့ ဒီလိုလေးလဲဖြစ်တတ်ပါတယ်လို့။
ဒီ အလွဲတွေကတော့ ရင် နာ စရာ ပေါ့လေ။
အနော့ရဲ့ နာမည်ကြီးကြီး မာစတာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အလွဲလေး ပြောပါရစေ။
ခုပြန်တွေး ခု ရင်ခံပါတယ်။
ဟို မမကြီး (လို့ ပဲ ထားပါတော့) ရဲ့ မွေးစား အဟွာလေးကနေ နာမည်ကြီး ဒီဇိုင်းနာဖြစ်လာပြီး ၂ ရောက်ပေါင်း ဖွင့်ထားတဲ့ ဒီဇိုင်း ဖက်ရှင်ဆိုင်မှာ …….
အနော် ဆတ်ဆော့ပြီး ပွဲဝင် ဂါဝန် ချုပ်ချင် နွန်းနွံ့ သွားအပ်ရောဗျာ။
တစ်ထည် ၃ သိန်းတဲ့။။
အပ်ပြီး စလုံး ပြန်လာပါတယ်။
ရလာတဲ့ အချိန်မှာ မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် ချုပ်ရိုးရော၊ ဒီဇိုင်းရော အတော်ကို စုတ်ပြတ်လွန်းလို့ ပိုက်ဆံဇောကပ် ဒေါသထွက်ပြီးသကာလ
ချို့ယွင်းချက်မှန်သမျှ ကို ဓာတ်ပုံရိုက်၊
ဒုတိယ အကြိမ်ပြန်မကြည့်ချင်လို့ပါ လို့ ဆဲ စာ ဆန်ဆန် နာအောင် စာရေးပေးလိုက်တာပါ။
ပြန် ဖြေရှင်းပုံကတော့ သင်းပါရဲ့။
သူတို့ မာစတာကြီးက အလုပ်များလို့ ကိုယ်တိုင်မချုပ်လို့ပါတဲ့။
စာသွားပေးတဲ့ လူကို ပိုက်ဆံ ၅ သောင်းပြန်ပေးလိုက်ပါတယ်။
၂ သိန်းခွဲက ပလုံပါတယ်။
မိဆွိတို့ အဲ့လို ခံလိုက်ရတာပါ။
အဲ့ဒါဆို အရှေ့က ဆိုင်းဘုတ်ကြီးနဲ့ သူ့နာမည် အတွက် ဒီ လိုပဲ လွှတ်ထားလိုက်သလားမသိ။
ကျနော်တို့ ဆီက ပေးလိုက်ရတာ ရော ပိုက်ဆံမဟုတ်ဘူးလားမသိ။
ကျနော့ သူငယ်ချင်း ၂ ယောက်ရော အဲဒီလိုပဲ။
လူ ကွာတယ်ပဲ မှတ်ပါတယ်လေ။
နာတိဒယ်။ နာမည်သုံးလုံးနဲ့မှုတ်လား။ သူ့အပ်ချုပ်ဆရာလဲနာတိဒယ်။ cutting ကို သူကိုယ်တိုင် လုပ်ချင် လဲလုပ်တယ် ( ရှားပါတယ်။ )။ သင်တန်းသားတွေခိုင်းချင်လဲခိုင်းတယ်။ ချုပ်တာက တခြားလူချုပ်ခိုင်းတယ်။ ဒီဇိုင်နာတိုင်းတူတူ ပဲအေ။ မင်းသမီးအထည်တွေမှ သူတို့က ကိုယ်တိုင်ချုပ်တာ။ တခြားလူဆိုလို့ကတော့ လုံးဝလှည့်မကြည့်။
စ-လည်-ဆုံး ပရော့ဆက် တခုလုံးကို မှတ်တမ်းထားပြီး သက်သေယူပြီး
မီဒီယာကနေ သမ သင့်တဲ့ ဟာမျိုးဗျ….
မီဒီယာဆိုလို့ .. ပြည်တွင်းမီဒီယာ ဆို ဒင်းတိုချင်း သင်းမှာ ပင်းမှာ စိုးရသေးသဗျ…
တိုင်းတပါး မီဒီယာနဲ့ ဆော်ဗျာ …။ အဲ့ …မြန်မာပြည် ဈေးကွက်ဝင် မိန်းစတွင်မ်း က
ထိပ်တန်းဆြာတွေ မှာတောင် ဂလို ဂလိုတွေ ရှိပါတယ်ဗျို့လို့ ..ကမ္ဘာကိုချပြကြည့်..
မှန်လျက်ကမှား …လူမျိုးခြားနဲ့ ပေါင်းပြီး တိုင်းပြည်မျက်နှာ အိုးမည်းသုတ်သတဲ့ …
စိတ်ရိုင်းလေး ပေါ်လာတုန်း ခဏ။
ဒါမဲ့ သူများ စီးပွါးရေး တုတ်နဲ့ ထိုးသလို ဖြစ်မှာဆိုးလို့။
လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ ဒီနိုင်ငံမှာ လုပ်ရမဲ့ဟာတွေအများကြီးပေါ့မယ်ဂိရေ။ ၀န်ဆောင်မှု့ညံ့ဖျင်းတာ ကိုတရားဆွဲဖို့ဆို တာကလဲ တရားရုံးဆိုတာ မြန်မာလူမျိုးတွေအတွက်ကြောက်စရာလို့မြင်နေတော့ သူတို့ဆားဗစ်တွေ ကဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေတာမဆန်းပါဘူးအေ။
နာမည်ကျော် တရားခံပြေးတစ်ယောက်ကို ဘယ်လိုမှဖမ်းမရခဲ့ပါဘူး
မိချင်တော့ လည်း ကြည့်မြင်တိုင်ဘက်မှာ လမ်းဘေးရန်ပွဲတစ်ခုကနေ
အဲဒီလိုလေးဖြစ်ကြတဲ့ အကြောင်း ဆိုလို့ 
ကျုပ် တွေ့ ဖူးတာထဲက တစ်ခု ပြောပြရမယ် ဆိုရင်
သူ့ ကိုယ်သူ မိကောင်းဖခင် သမီး ပါ ရှင် ဆိုပြီး ၊ မသံပေးရင်းနဲ့ 
ဘဲတွေ ပလူပျံအောင် ရသွားရှာပြီး
နောက်ဆုံးမှာတော့ တစ်ယောက်ထဲပဲ ကျန်နေခဲ့ရှာတယ်
အဲဒီလိုလေးတွေ ဖြစ်တာ သိပ်ဆိုးတာပဲ
အေးပေ့ါအေ။ ပေါ်ပြူလာဆိုတိုင်းလဲယုံလို့ရတဲ့ခေတ်မဟုတ်ဘူး။ ရွက်ပုံးသီးတွေ ရှာသင့်တယ်။
ဒီလိုလေး ဖြစ်တာက အကြောင်းမဟုတ်ဘူး ခံစားလိုက်ရတဲ့သူကမသက်သာလှဘူး လူအချင်းချင်းလှည့်ပတ်ခြင်း ကင်းရှင်းကြပါစေ
တကယ်မသက်သာတာပါ။ အဲဒီကြော်ငြာဆို ယနေ့ထိ တခါတရံလာနေဆဲမို့ အဟောင်းအဟာင်းတွေက အသစ်အသစ်တွေဖြစ်ရပါတယ်။
အလွဲအချော်ဆိုတာ ရှိတတ်ပေမယ့် ၀န်ဆောင်မှုနဲ့ ၀န်ဆောင်ခမကိုက်ညီရင် အဲဒီ ၀န်ဆောင်ခကို မယူပဲနေခြင်းဖြင့်ဲတောင်းပန်သင့်ပါတယ်။
အင်းခက်တာက မြန်မာလူမျိုးကလဲတောင်းပန်လိုက်တာနဲ့ အစားထိုးပေးတာနဲ့ပဲကျေနပ်ကြတာ ဆိုတော့ အောင့်သီးအောင့်သက်ပါပဲအန်တီကြာရေ။ အဲဒီကြော်ငြာဆို အခုထိစိတ်ပျက်တုန်း။
ဟုတ်တယ် ဓါတ်ပုံကတော့ကျွန်မနဲ့တိုက်ရိုက်မဆိုင်ပေမဲ့ ကြော်ငြာကတော့ ကိုယ်ကပါဝင်ပါတ်သက်ခဲ့တော့ နဲနဲတော့စော်ကားခံလိုက်ရသလိုပဲပေါ့။ ပိုင်ရှင်နဲ့တော့ဘယ်လိုညှိလိုက်လဲတော့မသိပေမဲ့ တနေကုန်ပင်ပန်း ကုန်ခဲ့ရတဲ့ပိုက်ဆံတွေအတွက်နဲနဲတော့မကျေနပ်ပါဘူး။
အဲဒါက ကိုယ်ထမင်းရှာစားတဲ့အလုပ်ကို မလေးစားလို့
ကောင်းပြီကောင်းရဲ့နဲ့ တာဝန်တွေကို ပါးစပ်ကယူထားပြီး
နေ့စဉ်လောကမှ အမြဲ မြင်နေရပါ၏။
အဲဒီလိုမလေးစားလို့လဲ အခုတလော အဲဒီဒါရိုက်တာလေးနာမည်တောင်မကြားမိတော့ဘူး။ ခါတိုင်းဆို ဒါရိုက်တာ *** ဆိုပီးမကြာမကြာတွေ့နေရတာ။ အဲလိုတွေဖြစ်ပါများတော့နေရာပျောက်သွားတယ်နဲ့တူ ပါတယ်။ သူ့သူငယ်ချင်းအဆိုတော်မင်းသားလေးကတော့အောင်မြင်ဆဲပါ။ အဲဒီနေ့ကကြည့်ရတာ အဲဒီအဆိုတော်မင်းသားလေးကတော့ သူ့အလုပ်သူလေးစားပုံရတယ်။ ဒါကြောင့်လဲယနေ့ထိအောင်မြင်နေတာပါ။
Junior Style Stars Competition ယူအက်စ်တနိုင်ငံလုံးပြိုင်တဲ့ပွဲမှာ… မြန်မာဇာတိနွယ်ကဒီနှစ်အတွက်.. ဆံပင်မျက်နှာ… ပြင်ဆင်မှုပထမရတယ်ဗျ…။
လှတယ်သဂျီးရေ။ ဂုဏ်ယူပါတယ်။ မြန်မာသွေးမနဲပါဘူးနော့။ နောက်ဒီဇိုင်နာတယောက်ရှိသေးတယ်နော သဂျီး LA ကပဲမှတ်တယ်။ ကောင်လေးတစ်ယောက်။ နာမည်မေ့နေလို့ တရုတ်ကလေးလေ။
ဒီလို လေး ဖြစ် တတ်တာကို ဖတ်ပြီးး
ဒီလိုလေး မန့် ခဲ့ပါတယ်
ဒီလိုလေးလဲဖြစ်တတ်ပါတယ် …. ကို
ဒီလိုမဖြစ်အောင် သေချာလုပ်ဖို့တော့ လိုတာပေါ့ဗျာ။
ခံရတဲ့သူတွေကငြိမ်နေတော့လဲသူတို့လုပ်တိုင်းဖြစ်နေတာပေါ့ကိုခင်ခရယ်။ အားနာပါတယ် သူများထမင်းအိုး မခွဲကောင်းပါဘူး နောက်တခါကိုယ်သွားမလုပ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ မြန်မာလူမျိုးတွေ ( ကျွန်မပါအပါ အ၀င် ) တွေရဲ့ အားနည်းချက်အပေါ်အခွင့်ကောင်းယူတဲ့သူမျိုးတွေပေါ့။
သဲနု ရေ စားသုံးသူတွေ ကိုယ်စား ဒါမျိုးတွေ အကြောင်းတွေကို လိုက်ရှာပြီးကို ရေးသင့်တယ်။
မှားရင်လဲ အပြောခံရ သူတို့ဘက်က အချက်အလက်နဲ့ ပြန်ဖြေရှင်းပေါ့။
ရေးသူက တမင်ဖွ လဲ ပွင့်လင်းတဲ့သတင်းအချက်အလက် ပေးနိုင်ရင် အမှန်တရား ဆိုတာ ဘယ်အခြေအနေဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ဖုံးထားလို့မရ။ ပေါ်မှာပါဘဲ။
ဘယ်မှာဘဲဖြစ်ဖြစ် အမှား မကင်းနိုင်ပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ မတော်တဆ ဖြစ်သွားတဲ့အမှား နဲ့ တမင်ကို ဂရုမစိုက်တဲ့ အမှား တော့ ကွာတာပေါ့။
မြန်မာတွေမှာ အားနည်းနေနိုင်တဲ့ အဓိက အချက် က စားသုံးသူတွေရဲ့ Feedback စကားသံ ကို နားမထောင်တတ်တာဘဲ။
အရင်ကတော့ ဈေးကွက် ပြိုင်ဆိုင်မှု အားနည်းနေတာရယ်၊ မီဒီယာပွင့်လင်းမှုမရှိတာရယ် နဲ့ စားသုံးသူတွေမှာ ရွေးစရာမရှိခဲ့ဘူး။
ဒီနေ့လို ခေတ်မှာတော့ ဒါမျိုး အချိုးတွေ ချိုးနေဆဲ ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ထမင်းအိုးကို ကိုယ်ရိုက်ခွဲတာဘဲ။
ပိုက်ဆံပေးသူ မှန်သမျှ ကိုယ့်ထမင်းရှင်ဘဲ။
အဲဒီ အပေါ်မှာမှ ထပ်ပြီး လူတန်းစားခွဲပြီးဆက်ဆံရင်တော့ အတော်ညံ့တဲ့ စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်မို့ အားမပေးသင့်ဘူး။
ဒါမျိုး စိတ်ဓာတ် တွေ ပျောက်အောင် ဘယ်သူကဘယ်လိုဆိုတာ ဖော်ထုတ် ပြမှ ဖြစ်မှာ။
မဟုတ်ရင် မသိသူတွေ အတွက် အန္တရာယ်ဘဲလေ။
ဒါဟာ အားနာစရာမဟုတ် လို့ ထင်တာပါဘဲ။
ဟုတ်တယ်အရီးရေ။ ရေးချင်တာ အူကိုယားနေတာ။ အော်မကောင်းပါဘူးလေဆိုပီးနေတာ။ အခုတော့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လိုက်လုပ်တာမလုပ်တာသူတို့အပိုင်း မကောင်းတာကိုမကောင်းဘူးလို့ပြောရမှာ ကိုယ့်အပိုင်း လို့ခံယူထားပြီး ကိုယ်ခံရတာလေးတွေ အမြင်မတော်တာလေးတွေရေးမိနေတာပါပဲ။ တိုင်းပြည်တခုတိုးတက် တယ်ဆိုတာလဲ လူတွေစိတ်ဓါတ်တိုးတက်မှ ပိုတိုးတက်မယ်လို့မြင်မိတာကြောင့် သိသွားရင် ရှက်တတ် ရင် ပြင်ဆင်လို့ရအောင် မသိသေးရင်လဲ အော်ဒါလေးလိုနေတာကိုးဆိုပီးသိသွားအောင်တော့ ကိုယ်တတ်နိုင် တာလေးရေးဖို့စိတ်ကူးထားပါတယ်။ အခုကလဲဒီမှာဖြစ်နေတာက ခံလိုက်ရတဲ့သူတွေက အော်တော် ပါပြီ နောက်တခါဆိုရုံလေးနဲ့ပြီးသွားတတ်ကြတာမို့ သူတို့ကလဲ ထင်တိုင်းကြဲနေတယ်လို့ခံစားမိနေလို့ပါ အရီးရေ။
“ခံလိုက်ရတဲ့သူတွေက အော်တော် ပါပြီ နောက်တခါဆိုရုံလေးနဲ့ပြီးသွားတတ်ကြတာမို့ သူတို့ကလဲ ထင်တိုင်းကြဲနေတယ်လို့ခံစားမိနေလို့ပါ အရီးရေ။”
ပြောချင်တော့ပါဘူး ဦးကြီးမိုက်ရေ။ မနေ့ကပဲထပ်ဖြစ်သွားတယ်။ အမြန်လမ်းကားမှောက်တဲ့ ပိုစ့်မှာ ကွန်မင့်ပေးထားတာ။ ဘယ်သူလဲတော့မသိပါဘူး။ သူလဲကြုံဖူးတယ်တဲ့။ ကားမောင်းသမားတွေအ ရက်သောက်တာ။ စကားလဲပြောလိုက်ကောအရက်နံကိုထောင်းထောင်းထနေတာပဲတဲ့။ ဒါပေမဲ့နာမည်ကြီးလိုင်းမို့နာမည်တပ်မပြောတော့ပါဘူးတဲ့။ အဲလိုကိုမှားနေတာ။ တကယ်ဆိုနာမည်ကြီး လိုင်းပဲ ဖြစ်ဖြစ် နာမည်မကြီးလိုင်းပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပြောကိုပြောရမယ်မဟုတ်လား။ အဲဒါမှလဲပြည်သူတွေလုံခြုံမှာ မဟုတ်လား။ နာမည်ပျက်မှစိုးလို့မပြောတော့ဘူး။ ကားသမားမူးပြီးဖြစ်ကာမှ ကံပုံချလိုက်မယ်ဆိုတာ မျုိးတွေများနေတော့ ထင်တိုင်းကြဲနေကြတာမဆန်းပါဘူး။ စာမျက်နှာပေါ်ကမပြောချင်လဲ လိုင်းတာဝန်ရှိ သူ တွေကိုပြောသင့်တယ်ဆိုတာလေးမျုိးသိလာအောင် အဲလိုပညာပေးမှု့တွေလဲ လိုအပ်လာပြီလို့ထင် ပါတယ်။
ဒီလိုလေးတွေဖြစ်တတ်တယ် ဆိုပြီး နေရာတိုင်းခွင့်မလွှတ်သင့်ပါဘူး
ဒီလိုလေးတွေဖြစ်တတ်လို့ ဒီလိုဖြစ်အောင် ဂွင်ဆင်ပြီး လုပ်စားနေကြတဲ့သူတွေ အများကြီးနော်.. ။
ဟုတ်တယ်။ မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ အားနာပါတယ်ကို စွန့်လွှတ်သင့်ပါပြီ။ ဒါလေးလဲ ပညာပေးသင့်ပါတယ်။
မြန်မာတွေ ခွင့်လွှတ်လွယ်နေကြတာကိုကလည်း ဒီလိုအမှားတွေ ကျုးလွန်ဖို့အတွက် အခွင့်အရေးရနေကြတာ။
ဟုတ်တယ် မမရေ။ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာဝေဖန်မှု့တွေကို ကြိုဆိုမှ ကိုယ့်လုပ်ငန်းတိုးတက်မယ်ဆိုတာလဲ လုပ်ငန်းရှင်တွေကမသိကြသေးဘူး။ အဲလိုနာမည်တပ်ပြောလိုက်ရင် အသရေဖျက်တယ်၊ မနာလိုလို့ဆို တဲ့အပြောမျိုးတွေလုပ်ငန်းရှင်တွေပြောလေ့ရှိတယ်။ ဟုတ်သားပဲငါပြင်လိုက်မယ်ဆိုတာမျိုးတွေရှားတယ်။ အနှစ်နှစ်ဆယ်လောက်ဖျက်စီးခံလိုက်ရတဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေပေါ့လေ။